यी आठ काम जाडोमा गर्न नहुने - ज्ञानविज्ञान
१. सनब्लक लोसन नलगाउने
२. चियाकफी बढी नखाने
जाडोमा ज्यान तताउला भन्ने सोचेले पटकपटक तातो चियाकफी खाने गरिन्छ । तर, यसले उल्टो बेफाइदा गर्छ । चियाकफी बढी खाएमा शरीरमा क्याफिन र सुगरको मात्रा बढ्न पुग्छ । जसले गर्दा शरीर डिहाइड्रेट हुने, रगतमा चिनीको मात्रा बढ्ने, निद्रा नलाग्ने आदि हन्छ । चियाकफीको सट्टा जाडोमा तातो दूध, ग्रिन टी अथवा तातो पानी खाने बानी बसाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।
३. पानी कम नखाने
जाडोमा पसिना नआउनेलगायत कारणले गर्दा त्यति तिर्खा लाग्दैन । तिर्खा लागेन भन्दैमा पानी नखाने अथवा असाध्यै कम खाने गर्नु हुँदैन । जाडोमा छाला फुस्रो हुने, कब्जियत बढ्ने, ओठ फुट्ने आदि समस्या देखिन्छ । समयसमयमा पानी खानाले यस्तो समस्या कम हुन्छ ।
४. घाम बढी नताप्ने
५. बढी नसुत्ने
जाडोमा सिरकबाट निस्किन मन लाग्दैन । त्यही भएर जाडोमा ढिलो उठिन्छ । छुट्टिको दिन सिरक ओडेर सुतेर बिताइन्छ । तर, यस्तो गर्नु हुँदैन । वर्षैभरि सुत्ने र उठ्ने समय एउटै बनाउन सके स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ । सुत्ने र उठ्ने समय भंग भएमा दीर्घकालमा अनिद्रालगायत समस्या उत्पन्न हुने जोखिम हुन्छ ।
६. मास्क नलगाई ननिस्कने
विशेष गरी जाडोमा खास गरी बिहानबेलुका कतै निस्किनुप¥यो भने मास्क लगाउन बिर्सिनु हुँदैन । किनकि, जाडोमा बिहान र बेलुका वायुमण्डलको तल्लो तहमा ब्याक्टेरिया, भाइरसलगायत जीवाणु बढी क्रियाशील हुन्छन् । साथै, धुलोका कण पनि यो समय वायुमण्डलको तल्लो तहमा जम्मा भएका हुन्छन् । यस्तोमा मास्क नलगाइ निस्किएमा श्वासप्रश्वास, छाला आदि सम्बन्धी रोग लाग्ने जोखिम बढ्छ ।
७. न्यानो कपडा नलगाउने
फेसनेबल र शरीर नछोपिने खालका कपडाभन्दा गम्म परेका लुगा लगाउनु उपयुक्त हो । जाडोमा हेलचेक्राइ गरे रुघाखोकी, ज्वरो, निमोनिया आदि हुने र नशामा रगत जम्नेजस्ता समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
८. समय लगाएर तातो पानीले ननुहाउने
जाडोमा तातो पानीले नुहाउनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । तर, बढी तातो पानी खन्याउनु हुँदैन । बढी तातो पानी खन्याउँदा छालामा रहेको प्राकृतिक म्वाइस्चराइजर कम हुन गई छाला फुस्रो बन्छ ।
Topics #काम #जाडो
Don't Miss it यसाे गर्नुस् निद्रा नलागे
Up Next दन्तरोग जटिल बन्दै
कति प्रभावकारी र सुरक्षित घरेलु उपचार ?
घरेलु उपचारले दीर्घकालिन प्रभाव पार्छ । तुलनात्मक रुपमा घरेलु उपचार धेरै सस्तो र सजिलो पनि हुन्छ । हामीलाई थाहा छ, एलोपेथिक उपचार…
कुनै पनि कार्यमा महाहस्ती बन्न असफल नभई अगाडि बढ्न सकिन्न । उत्कृष्ट परिणाम प्राप्तिका लागि तपार्इँले ठक्कर अवश्य पनि खानुहुनेछ…